चीन ब्रान्ड नयाँ २ पीएसी ढोका भान्सा कैबिनेट निर्माता र आपूर्तिकर्ता - जम्मू र एस
फ्लैट प्याक किचन
भान्छा क्याबिनेट ढोका
थर्मोफिल किचन ढोका
लाह किचन ढोका
मेलामाइन किचन ढोका
एक्रिलिक किचन ढोका
कस्टम भान्सा क्याबिनेट
आधुनिक शैली भान्छा
गाउँमा शैली रसोईघर
लक्जरी स्टाइल किचन
Closet मा पैदल
वार्डरोब डोरको साथ
आधुनिक बाथरूम कैबिनेट
दराज स्लाइड प्रणाली
भान्सा भण्डारण प्रणाली
घर > उत्पादनहरू > कस्टम भान्सा क्याबिनेट > लक्जरी स्टाइल किचन > ब्रान्ड नयाँ २ पीएसी ढोका किचन क्याबिनेट
दुई दराज आधार फ्लैट प्याक रसोई डिजाइन
ओवन आधार फ्लैट प्याक अलमारी
डबल ढोका बेस Flatpack भान्छा
एकल ढोका बेस फ्लैट प्याक भान्छा
ब्रान्ड नयाँ २ पीएसी ढोका किचन क्याबिनेट
हामी ब्रान्ड नयाँ २ पीएसी ढोका किचन Cabinet.here आपूर्ति यू आकार भान्सा मा एक काम त्रिकोण छ।
हामी ब्रान्ड नयाँ २ पीएसी ढोका किचन Cabinet.here आपूर्ति यू आकार भान्सा मा एक काम त्रिकोण छ। भान्सा प्रयोगकर्ताहरु लाई खाना र बर्तन सफाई मा एक ठूलो काम गर्ने क्षेत्र मात्र छैन, तर उनीहरु सजिलै संग भान्सा को बाहिर मान्छे संग कुराकानी गर्न सक्छन्। गाढा रंग शास्त्रीय, शाश्वत, उच्च अन्त हो र एक लामो समय को लागी सेवा गर्न सकिन्छ। यो एक कुक को लागी एक ठूलो काम ठाउँ सिर्जना गर्दछ। टुक्रा टुक्रा को सामग्री खरोंच र गर्मी प्रमाण मा उत्कृष्ट प्रदर्शन छ।
2PAC भान्छा कैबिनेट दराज कैबिनेट आफ्नो भान्छा वा कुनै पनि कोठा सजिलो र राम्रो संग संगठित को remodeling बनाउँछ।
संकीर्ण भान्छा कैबिनेट कुना प्रणालीहरु तपाइँ मेहनत को लागी कुना सम्म पुग्न को लागी अधिकतम भण्डारण गर्न दिनुहोस्।
ब्रान्ड नयाँ भान्छा क्याबिनेट प्यान्ट्री एकाई लचीलो छ र वस्तुतः सूट गर्न अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
भान्छा भित्ता क्याबिनेट भित्ता भण्डारण क्याबिनेट अधिक दराज ठाउँ खाली र भान्छा भण्डारण ठाउँ विस्तार गर्न भित्ता क्याबिनेट को उपयोग।
ब्राण्ड नयाँ २ पीएसी ढोका किचन क्याबिनेट को प्यारामिटर
२ पीएसी भान्छा कैबिनेट र ढोका, ढोका संग संकीर्ण भान्छा कैबिनेट
ढोका संग भान्सा पर्खाल कैबिनेट, चीनी भान्छा कैबिनेट
ब्रान्ड नयाँ किचन क्याबिनेट
PERMIUM MFC (कण बोर्ड)
सामान्यतया सेतो मा
टुक्रा टुक्रा ढोका
क्वार्ट्ज/ठोस सतह/संगमरमर/ग्रेनाइट (प्राकृतिक वा कृत्रिम)
ब्रान्डेड दराज, कटलरी, कुना टोकरी, पेन्ट्री, spic र्याक बाहिर तान्नुहोस्
आकार र डिजाइन
कस्टम आकार र डिजाइन
तल्लो क्याबिनेट मानक आकार
D580mm*H720mm, D600mm*H762mm (अनुकूलित)
माथिल्लो क्याबिनेट मानक आकार
अग्लो क्याबिनेट मानक आकार
डी: 600mm वा 580mm, एच: 2100mm वा 2300mm (अनुकूलित)
Details of ब्रान्ड नयाँ २ पीएसी ढोका किचन क्याबिनेट
E 'पर्यावरण मैत्री कण बोर्ड/प्लाईवुड
हाम्रा सबै प्यानलहरु उत्सर्जन वर्ग यूरोपीय E1 अनुपालन र कडा कैलिफोर्निया एयर संसाधन बोर्ड (CARB) उत्सर्जन मापदण्ड पूरा। (Formaldehyde उत्सर्जन <= 0.08mg/m3)
me'¡ सही melamine एज ब्यान्डि and र प्रति ड्रिल छेद
चार पक्षीय किनारा सील क्याबिनेट डिजाइन को लाभ मात्र formaldehyde को रिलीज कम गर्न को लागी होईन, तर यो पनि बोर्ड सब्सट्रेट मा विरूपण रोक्न नमी को रोकथाम को लागी।
¢ '¢ क्याबिनेट हार्डवेयर र सामानहरु जडान गर्नुहोस्
BLUM र DTC: अन्तर्राष्ट्रिय शीर्ष ब्रान्ड संग सहयोग। सेवा जीवन को 50 वर्ष। २,००,००० उद्घाटन र समापन चक्र test.Also शीर्ष HIGOLD, NUOMI.We को रूप मा शीर्ष ब्रान्ड रसोई सामान आपूर्तिकर्ता को साथ सहयोग।हम लगातार विकास र आविष्कार, पूरा घर कस्टम को लागी अधिक बुद्धिमान, सुविधाजनक र फैशनेबल भान्सा भण्डारण प्रणाली हार्डवेयर अनुकूलन समाधान को विकास। डिजाइन बाट, सेवा गर्न को लागी, हामी लगातार J & Sâ products products s ​​उत्पादनहरु को मूल्य मा सुधार, ग्राहकहरु को लागी मूल्य सिर्जना, र अधिक परिवारहरु को लागी उच्च गुणस्तरीय घर जीवन महसुस।
जर्मन मशीनरी र HOMAG र reg द्वारा उत्पादन सफ्टवेयर संग सहयोग; र सबै भन्दा राम्रो गुणस्तरीय सामाग्री र बुद्धिमान मिसिन को उपयोग गरेर, जम्मू र एस का उत्पादनहरु कडा प्रतिस्पर्धी मूल्य संग उच्च गुणवत्ता बनाए।
1. काट्ने मेसिन
जो आकार सटीकता प्रभावित, हामी सीएनसी उच्च परिशुद्धता सामग्री ओपनर use 0.5mm को त्रुटि नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ प्रयोग गर्नुहोस्। हामी प्यानल काटन, आईपीसी र सफ्टवेयर जडान संग सुसज्जित, स्वचालित, डिजिटल काटन प्राप्त गर्न को लागी कम्प्यूटर को उपयोग गर्दछौं।
2. मोडलिंग मिसिन
क्याबिनेट को स्थिरता को कुञ्जी slotting.Here तपाइँ तपाइँको भान्छा को ढोका मोडेलिंग निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ।
3.Auto एज ब्यान्डिंग मिसिन
हामी जर्मनी आयात होम एज बैन्डि machine मिसिन, उन्नत टेक्नोलोजी, गुणस्तर र aesthetic.Good किनारा ब्यान्डिंग सुनिश्चित गर्न को लागी खराब दुर्गन्ध फैलाउन रोक्न को उपयोग गर्दछौं।
4. स्वत: ड्रिलिंग मिसिन
क्याबिनेट कोडांतरण होल ड्रिलिंग मा निर्भर गर्दछ, आयामी परिशुद्धता मा धेरै सख्त, यदि 0.5mm त्रुटि छ यो कैबिनेट इकट्ठा गर्न सकिदैन कारण गर्न सक्षम हुनेछ।
5. प्यानल क्रमबद्ध र QC
हराउन वा गलत size.Details बाट बच्न को लागी सबै कुरा हो, विवरण क्याबिनेट गुणस्तर को लागी महत्वपूर्ण छ।
6. सफाई र प्याकिंग
राम्रो प्याकि material्ग सामग्री र यो सुनिश्चित गर्न को लागी कि यो दुर्घटनाग्रस्त वा पारगमन मा भाँचिएको छैन को रक्षा गर्दछ। ठूलो परियोजना को लागी, रंगीन लेबल कामदारहरुलाई यो प्याकेज को पहिचान गर्न को लागी एकाइ वा भुइँ को लागी मद्दत गर्न को लागी हो।
व्यावसायिक रसद विभाग राम्रो ढंग बाट ढुवानी को व्यवस्था, सबै कागजात सही र समयमै क्रमबद्ध गरिनेछ।
भान्सा कैबिनेट, वार्डरोब, बाथरूम भ्यानिटी को लागी Oversea परियोजना मामला
एक स्टप समाधान संग तपाइँको परियोजना को लागी तपाइँको Cabinetry स्रोत;
१० बर्ष विदेशी परियोजना अनुभव, २,००० भन्दा बढी पूरा परियोजनाहरु विश्वव्यापी;
तपाइँ बिभिन्न बस्तुहरु तपाइँको परियोजना को आवश्यकता को लागी धेरै आपूर्तिकर्ताहरु संग व्यवहार गर्न बाट राख्नुहोस्;
तपाइँ सम्पूर्ण घर परियोजना प्याकेज को लागी अधिक अधिमान्य मूल्य प्राप्त गर्न को लागी सक्षम पार्नुहोस्;
क्षमता र विभिन्न आपूर्तिकर्ताहरु को वितरण को बारे मा चिन्ता बाट मुक्त।
मेरो वेबसाइट मा प्रवेश गर्न को लागी धन्यवाद। मलाई लाग्छ कि तपाइँ निम्न जानकारी जान्न चाहानुहुन्छ। यदि यो प्रश्न तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ समावेश गर्दैन, कृपया हामीलाई एक ईमेल पठाउनुहोस्।
Q. तपाइँ फ्रेमलेस अलमारियाँ निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ?
एक: अमेरिकी मानक फ्रेम कैबिनेट लाइन को अतिरिक्त, हामी प्रत्येक महिना फ्रेमलेस अलमारियाँ निर्माण।
Q. कसरी उत्पादन नेतृत्व समय र भुक्तानी अवधि छ?
A: उत्पादन नेतृत्व समय प्रारम्भिक आदेश को लागी ४० दिन र दोहोर्याउने आदेश को लागी २५-३५ दिन हो हाम्रो भुक्तानी अवधि १. ३०% T/T तार बिक्री अनुबंध अनुमोदन पछि र %०% ब्यालेन्स तार शिपिंग कागजातहरुको प्रतिलिपि पछि
Q. भान्सा कैबिनेट सामग्री चयन।
A: हामी धेरै भान्छा क्याबिनेट सामग्री, ढोका शैली, काउन्टर शीर्ष, ग्राहकहरु को विकल्प को लागी पैकिंग छ।
Q. काठ सामाग्री तपाइँ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ?
A: हामी melamine, पीवीसी, लाह, एक्रिलिक, काठ लिबास को ठूलो सामाग्री सूची छ।
Q. गुणस्तर को बारे मा
गुणस्तर नियन्त्रण को बारे मा, हामी एक सख्त गुणवत्ता नियन्त्रण टीम छ, ग्राहकहरु लाई उत्पादनहरु को निरीक्षण गर्न को लागी स्वागत छ।
A: सामग्री को पुष्टि पछि, हामी तपाइँको लागी एक उद्धरण बनाउनेछौं।
हट ट्याग: ब्रान्ड नयाँ २ पीएसी ढोका किचन क्याबिनेट, निर्माताहरु, आपूर्तिकर्ताहरु, थोक, कारखाना, अनुकूलित, स्टक मा, थोक, चीन, सस्तो, छुट, कम मूल्य, छुट, मूल्य, मूल्य सूची, उद्धरण, फेसन, नयाँ, गुणस्तरीय, टिकाऊ, नवीनतम डिजाइन,5बर्षे वारंटी, उत्तम दर्जे का, फैंसी
किफायती Pvc भान्छा कैबिनेट सेट अलमारी
ओभरहेड ग्रे ह्यान्डलेस किचन क्याबिनेट मा निर्मित
Unassembled टुक्रा टुक्रा घर भान्सा कैबिनेट
लक्जरी भान्छा कैबिनेट लेआउट डिजाइन Remodel
ठेगाना: साउथ ब्लक, रुइगाओ भवन, किआओजिन मध्य रोड, झिकियाओ टाउन, नानहाई, फोशन
कपाट निर्मातामा पैदल हिसाबमा निर्मित: कसरी कन्ट्री इन वाक्ट इन कस्ट्रेटमा कसरी बनाउने
कपाटमा बनेको निर्मित हाम्रो लागि धेरै उपयोगी छ। कन्ट्री इन वाक इन कमान्डमा परम्परागत भन्दा धेरै फाइदाहरू छन्। यसले ठाउँ बचत गर्दछ र धेरै सुन्दर छ। यति धेरै व्यक्तिहरू आफ्नै घरहरूमा कन्ट्रोमा वॉक इन निर्माण गरेका छन्, तर धेरै व्यक्तिहरू कन्ट्रोमा वाक इन इन बनाउँदै छन्। जब मैले धेरै समस्याहरूको सामना गरें, मलाई केही समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने पनि थाहा थिएन। मलाई कपालमा वाक इन इन कसरी बनाउने भनेर परिचय दिनुहोस्।
काउन्टरटपहरू दैनिक भान्छा क्याबिनेटहरूको मर्मतका लागि
सामग्री जस्तोसुकै भए पनि, यो उच्च तापमान सखापबाट डराउँछ। प्रयोगको क्रममा, क्याबिनेटहरूसँग तातो भाँडो र तातो पानीको बोतलहरूको सिधा सम्पर्क जोगिन होशियार हुनुपर्छ। तिनीहरूलाई भाँडो र्याकमा राख्न उत्तम हुन्छ; अपरेशनको बेला काउन्टरटपहरू र ढोका प्यानलहरू तीर्थ वस्तुहरूको साथबाट खार्नबाट बच्न कोसिस गर्नुहोस्।
प्रतिलिपि अधिकार © २०21 J&S घरेलू उत्पाद कं, सीमित। सबै अधिकार सुरक्षित।